Filtrer les éléments par date : vendredi, 17 mai 2019
vendredi, 17 mai 2019 22:13
Mexique: Mpanao gazety maty amperin’asa nisy nitifitra
Mpanao gazety mpikirakira trangam-piarahamonina i Francisco Romero Díaz. Ary mitatitra izany an-gazety sy amin’ny tambazotran-tserasera. Amperin’asa mihitsy izy no nisy namono omaly alakamisy 16 mey 2019. Nahitana dian-dratra sy diam-bala roa ny lohany, ary maty tsy tra-drano tany amin’ny toeram-pitsangatsanganana amorontsirak’i Playa del Carmen any Yucatan.
Efa nahazo fandrahonana an-telefaonina i Francisco Romero Díaz talohan’izao namonoana azy izao. Nametraka fitoriana olon-tsy fantatra izy tamin’ny 12 aprily 2019. Nangataka ny hahazo fiarovana manokana ihany koa izy, izay zo omen’ny lalàna any an-toerana ho an’ireo mpanao gazety tandindomin-doza na mahazo fandrahonana ho faty.
vendredi, 17 mai 2019 21:55
Antananarivo: Fiara roa mitondra mpanao gazety voatafika
Fiara manatitra mpiasa hody avy niasa ireto nisy nanafika ny alin’ny alakamisy hifoha ny zoma 17 mey 2019 ireto. Teo Andravoahangy iray, tora-bato no nikendren’ireo hampijanonana ilay fiara minibus Nissan. Mailo ny mpamily ka ny nirifatra nanafaingana ny dia. Vaky ny fitaratry ny fiara.
Teny Anosipatrana ny faharoa, nitam-basy ireo jiolahy. Tsy afa-nandroso ny fiara. Voaroba ny tao anaty fiara, lasan’ireo jiolahy hatramin’ny lakilen’ny fiara, ka tsy afa-nihetsika.
Fiara sendra nandalo no nanavotra, nampindrana finday nampandrenesana ny toeram-piasana, izay nandefa fiara hanaterana ireo mpiasa.
Tsy nisy aina nafoy, saingy horohoron-tsaina sy tebiteby no niainan’ireto mpiasan-gazety ireto iny alina iny.
vendredi, 17 mai 2019 21:37
Mpitsindrona “héroïne”: Misy zanaka Zandary sy mpandraharaha karohina
Mitohy ny fikarohana ireo mpitsindrona “héroïne” eto Toamasina ataon’ny Polisin’ny FIP, taorian’ny nahasamborana tanora dimy lahy tena mpanjifa sy mpitsindrona ity zavamahadomelina mahery vaika ity omaly, sy ilay mpivady mpamatsy azy ireo.
Tanora herotrerony, eo anelanelan’ny 19 ka hatramin’ny 23 taona ireo voasambotra ireo ; ary efa hatramin'ny volana janoary 2019 no mankaty no nitsindroman’izy ireo ity “héroïne” ity. Misy zanaka Zandary sy zanaka mpandraharaha naman’izy ireo, ary karohina fatratra amin’izao.
vendredi, 17 mai 2019 20:43
Bekopaka: Fiara nitondra mpizahatany voatafika
Tsy nisy ny aina nafoy fa vehivavy iray voatifitra ka naratran'ny bala nisafo ny lohany, ary fiara 4X4 iray marika Toyota no vaky ny fitaratra roa aoriana izay novakian'ireo dahalo, nakany ny entana tao anaty fiara.
Norobain’ireo olon-dratsy miisa 20 mahery, izay tanora kely ny ankamaroany, ny zavatra tao anaty fiara, toy ny finday, fakantsary ary vola rehetra tany am-balahan'ireo tao anaty fiara.
vendredi, 17 mai 2019 18:58
Maintirano: Lietnà iray voatifitry ny dahalo teo amin’ny lohany
Nandritra ny fifandonana tamin’ny dahalo, androany maraina, no nahavoa an’ity lietnà ity, tany ambanivohitr’i Maintirano.
Nalaina haingana tamin’ny helikoptera izy, nakarina aty Antananarivo hotsaboina, araka ny fanazavan’ny minisitry ny fiarovam-pirenena, Jeneraly Rakotonirina Richard.
vendredi, 17 mai 2019 18:04
Sina: Hafa mihitsy ny azy ny demokrasia
Misy 1.3 miliara ny isan'ny Sinoa.
Ny azy hafa mihitsy ny demokrasia.
Tsy misy hoe tiako na tsia eto, fa miezaka mandinika ny fiainandreo.
Ahoana tokoa moa raha ny ampahefatry ny mponina any no vehivavy tonga taona afaka miteraka. Izany hoe 300 millions vehivavy, ka samy bevoka aby izany, heritaona izany dia hisondrotra 300 millions tampoka eo ny isan'ny mponina? Izany hoe heritaona dia miakatra mitovy amin'ny isan'ny mponina any Europe manontolo, na any Etats-Unis manontolo, na aty Afrika manontolo?
Aiza ny trano asiana an'izany, ahoana ny sakafo omena an'izany, eny na ny fotodrafitrasa sy ny hanariana ny "tain'izany" aza raharaha be.
Normal be izy raha mametra hoe tsy mahazo miteraka mihoatra ny iray ny vehivavy sinoa, raha membre n'ny parti, dia mahazo miteraka 2, izao efa manomboka misy ny fanalalahana ny hiteraka fa mbola feno fepetra ihany.
vendredi, 17 mai 2019 15:41
YALI Mandela Washington Fellowship: Tanora mpitarika miisa 14 hiofana any Etazonia
Tanora mpitarika miisa 14 no voafantina hisitraka ny programa fifanakalozana YALI Mandela Washington Fellowship, omen’i Etazonia, ary hisolotena an'i Madagasikara sy ny Nosy Kaomoro.
Noraisina tetsy amin’ny masoivoho amerikanina izy ireo tamin’ity herinandro ity, nanomezana azy ireto ny toromarika momba ny fiatrehana ny fampiofanana, ary ny fivahinianan'izy ireo an'i Etazonia.
Tetikasa noforonin'ny governemanta amerikanina tamin'ny nitondran’i Barack Obama ny YALI Mandela Washington Fellowship, natao hampiofanana an'ireo tanora sangany aty Afrika, ho mpitantana matihanina sy hitondra fivoarana eo amin'ny manodidina azy.
vendredi, 17 mai 2019 15:28
Toamasina: Voasambotry ny Polisin’ny FIP ireo mpivarotra sy mpidoroka « héroïne »
Tovolahy vao herotrerony miisa 05 mpitsindrona « héroïne » no saron’ny FIP Toamasina omaly alakamisy 16 mey. Nahitana diana tsindrona maro ny tanan’izy ireo. Vidina 80 000 Ar ny iray grama. Manao tsipaipaika izy ireo ividianana ilay zavamahadomelina mahery vaika, dia ifampizarana izay azo.
Tratra tany koa ireo kojakoja nampiasain’izy ireo amin’ny fitsindromana an’ilay « héroïne » sy kojakoja sy ny tambavy fampidinana ny heriny raha sendra mamo loatra.
Voasambotra ihany koa ny mpivady fividianan’izy ireo ny « héroïne ». Sady mpivarotra no mpitsindrona ihany koa ilay rangahy.
Olona maro mpampiasa io zavamahadomelina mahery vaika io no mbola karohina eto Toamasina amin’izao fotoana izao.
vendredi, 17 mai 2019 15:24
Mahajanga: Raim-pianakaviana nitsoraka tao ambany kamiao, maty tsy tra-drano
Teo amin’ny toerana antsoina hoe : Plaque Barday Sotema no nitranga ny loza androany maraina. Tsy nisy nanampo ny nitsorahan’ity raim-pianakaviana ity tao ambany kamiao sendra nandalo.
Famonoan-tena no fahitan’ny manodidina azy. Fotoana fohy talohan’io dia voalaza fa efa nanindron-tena tamin’ny antsy ilay raim-pianakaviana no nisy nananakana kinanjo io nitsoraka tao ambany kamiao io. Maty tsy tra-drano izy, ary nipotsaka ny atidohany.
Olona mipetra manodidina ny toerana nitrangan’ny loza izy.